(DAAWO SAWIRADDA) Madaxweynihii hore ee Somaliya oo la kulmay Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Boston – idalenews.com
Madaxweynihii hore ee Dowladii ku meelgaarka ahayd Shariif Sheikh Axmed ayaa waxa uu kulan la qaatay Jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Boston.
Madaxweynihii hore ayaa inta uu kulanka socday Jaaliyadda u sheegay inuu Minxo waxbarasho ka helay ‘’Xarunta Madaxweynayaasha Afrika ee ka tirsan Jamaacadda Boston’’ wuxuuna sheegay in waxbarashadda ay muhiim u tahay Madax iyo Dhalinyaro isla markaana ay kaalin ka qaadaneyso waxbarashadda dhismaha aayaha dambe, isagoona sheegay in iminka uu baranayo cilmiga Diblomaasiyadda iyo Nabad-gelyada.
Inta ay xafladda soctay ayaa waxaa Su’aalo kala duwan oo ku saleysan Siyaasadda Somalia la weydiiyay Shariif Sheikh Axmed, waxaana ugu weyneyd Su’aalaha la weydiiyay Dagaalkii ay Dowladiisu la gashay Maleeshiyadda al-Shabaab.
Madaxweynihii hore Shariif Sheikh Axmed waxa uu Rajo ka muujiyay in Somalia ay caga dhiganeyso, Wuxuuna sheegay in Maleeshiyadda Alshabaabb mudooyinkaani looga itaal roonaaday.
Dhanka kale, Shariif Sheikh Axmed oo ka jawaabayay Su’aashii ku sabsaneyd Alshabaab ayuu waxa uu yiri ‘’Dagaalka al-Shabaab ma ahan mid ku saleysan diinta balse waxan aan dhihi karnaa waa mid ay rabto inay ku baabi’iso ummadda Soomaaliyeed oo 21-sano ku dhex jiray Dagaal’’ayuu yiri Shariif Sheikh Axmed, isagoo intaa raaciyay in damaciisa siyaasadeed uu sareeyo isla markaana uu weli yahay qof da’ yar, ayna jiraan waddooyin kale oo loo shaqeysan karo.
Si kastaba ha ahaatee Damaca Siyaasadeed Shariif ayaa waxa uu weli marayaa meel sare waxa uuna sheegay in in muddo ah isaga iyo qoyskiisa ay kusii noolaan doonaan gudaha jaamacadda Boston oo ay ka heleen Degnaansho.